> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Faylal ay ka Laptop
Waxaan ka Laptop soo kaban karto, tirtiray Files?
Waxaan leeyahay ka laptop Toshiba Win7. Dhowr maalmood ka hor ayaan soo guuriyeen faylasha qaar ka mid ah (sawiro, dokumentiyo iyo videos) ka drive adag dibadda saaxiibkay ayaa si aan laptop. Monday waxaan si qalad ah la tirtiro files kuwaas oo ka laptop oo ha loo madhiyo Recycle Bin. Ma jirtaa xal kasta oo aan iyaga u hanato karo ka laptop? Fadlan ii caawin.
Isdeji! Tirtirka ah Shil waa mid ka mid ah xaaladaha caadiga ah ee khasaaraha xogta. Files Your tirtiray kaliya calaamadeeyay xogta sida geli karin on your laptop ka hor xogta cusub iyaga overwrites. Waxa ay noqon doontaa arin wayn lahayn inuu ka soo kabsado files tirtiray ka laptop haddii aad joojiso isticmaalka aad laptop si degdeg ah oo ay isticmaalaan barnaamij soo kabashada xogta laptop habboon.
Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu fiican ee aad ka heli karto si ay u soo ceshano files tirtiray ka laptop. Waxaa si fiican u la shaqaysaa labada laptop Windows iyo buug Mac. Waa ay awoodaan in ay dib u soo ceshano noocyo kala duwan oo files tirtiray ka laptop, oo ay ku jiraan videos, sawiro, files audio, emails, document files, iwm
Hadda waxaad ka heli kartaa version tijaabo ah Wondershare Data Recovery hoos ku qoran. Version maxkamad wuxuu kuu ogol yahay in iskaan wadid aad laptop ee adag tahay in la raadiyo files tirtiray.
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Faylal ay ka Laptop? Waxaad u baahan tahay oo kaliya 3 Talaabooyinka
Haddaba qaado Windows version of Wondershare Data Recovery sida tusaale. Users Mac raaci karaan howlaha la mid ah inuu ka soo kabsado files tirtiray ka Mac buug la version Mac.
Kadib markii ay Wondershare Data Recovery aad laptop Windows, waxaad u baahan tahay in ay doortaan hab kabashada ah si loo bilaabo nidaamka.
Si aad u soo kabsado files tirtiray ka laptop, waxaad dooran kartaa "File lumay Recovery" mode sida isku day ah oo hore.
Tallaabada 2 Sawirka xijaab aad laptop ee files lumay
Markaas barnaamijka lagu ogaan doonaa oo waxaan ku tusi qoruhu aad laptop. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay doortaan mid ka mid ah aad rabto in aad soo kabsado files ka iyo riix "Start" badhanka si ay u bilaabaan iskaanka for files laga badiyay.
Tallaabada 3 ceshano files tirtiray ka laptop
Waxa uu ka kooban helay ayaa laga heli doonaa oo ku cad "nooca file" iyo "Jidka" ka dib markii iskaanka. Waxaad ka eegi kartaa sida badan files aad dib u soo ceshano karaan suuqa kala barnaamijka. Waxa kale oo aad sidoo kale ku eegaan karo helay images.
Ugu danbeyn, kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan faylasha aad rabto in aad dib u soo ceshano oo guji "Ladnaansho" iyaga badbaadiya aad laptop.